PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-01-10 - Abe nganokuthula ama­holide kaKhisimuzi
Abe nganokuthula ama­holide kaKhisimuzi
Eyethu Baywatch - 2018-01-10 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu
UKUSEBENZA ngokuzikhandla kwez­inhlaka zokuphepha okubalwa ku­zona abom­butho we SAPS, amaphoy­isa ezomg­waqo, izinkam­pani zono­gada, abez­imo ezi­phuthu­mayo kanye noMasi­pala waseMh­lathuze ikhona ok­wenze lama­holide aba nganokuthula njen­goba iningi labavakashi be­li­ham­bele izin­dawo ezigu­dle ugu ukuy­ochitha ama­holide.
Okhu­lumela uMasi­pala waseMh­lathuze, uMnuz. uMdu Ncalane uthe konke kuhambe kahle ku­zona zonke izin­dawo lapho kade kuqhubeka khona iz­inhlelo zobum­nandi kusukela ezinkundleni za­seMh­lathuze lapho bekun­aba­c­uli khona kuze kuy­ofika ol­wan­dle lapho iningi be­liyoshawa khona umoya njen­goba kade lishisa kakhulu ilanga.
Uphinde waveza ukuthi njen­go­masi­pala kubenza bagqugquzeleke ukuthi bakhu­phule izinga lobum­nandi minyaka yonke ngoba umphakathi uyay­ihlonipha imicimbi abay­ih­le­layo ngokuthi uziphathe kahle.
Uphethe ngokugx­eka isenzo es­isodwa esin­ge­sihle nesone wonke um­sebenzi ka­masi­pala saphinde saphatha kabi abaningi sokubu­lawa kweKhansela Njab­ulo Dlamini waseJozini kodwa ke abanethemba lokuthi abom­thetho bazoyid­lala in­dima yabo ukuze ba­jeze labo abenze okubi.
Okhu­lumela amaphoy­isa as­esi­fun­deni saseKing Cetshwayo, uKap’teni Mbon­geni Md­lalose un­come kakhulu ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoy­isa imini nobusuku uku­vala zonke izin­dawo ezi­nobugebengu ngok­wenza izivim­bamg­waqo ku­zona zonke iz­in­tuba ezin­genela es­i­fun­deni ukuze aban­gaphakathi baphephe.
Uphinde wan­coma iza­khamizi ez­abahlonipha ngokuthi uma zi­hamba zan­gashiya kubonakala ukuthi azikho nok­wenza kunga­bilula ezigebeng­wini ukuthi zi­bone ukuthi zi­na­math­uba okuthi zi­zo­ganga nok­wenze lehle kakhulu izinga lokugqekezwa kwem­izi ku­lonyaka.
Ugcine ngelokuthi abazukuqhuba lomkhankaso ngama­holide kuphela kodwa noma inini angeke nhlobo babukele imigu­lukudu ichanasa bazoy­iqo­qela en­daweni yayo ephelele. Vis­i­tors en­joy peace­ful hol­i­days in King Cetshwayo District
Bezigcwele kan­jena zonke izin­dawo zokub­huda enyakatho nogu njen­goba bekuqhubeka ama­holide kaN­cibi­jan